मनिषाको ‘डियर माया’ लाई माया नै माया तर…? « Ramailo छ
मनिषाको ‘डियर माया’ लाई माया नै माया तर…?
प्रकाशित मिति : Jun 7, 2017
समय : 8:19 am
पाठेघरको क्यान्सरपछि अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले अभिनय गरेको फिल्म ‘डियर माया’ गत सातादेखि बलिउड बजारमा प्रदर्शन भएको छ । नेपालमा रिलिजको मौका नपाएको मनिषाको कमव्याकवाला फिल्मले व्यापार र प्रतिक्रिया कस्तो पायो ? बलिउड अनलाइनमा आएको समाचारको आधारमा हामीले समाचार तयार गरेका छौं ।
समिक्षालाई आधार मान्ने हो भने ‘डियर माया’ मा मनिषाले एकदमै राम्रो काम गरेकी छिन् । एक्ली महिलाको भूमिकामा उनी फिट देखिएकी छिन् । रेखा देखि शाहरुख सम्मले उनको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् । फिल्म र मनिषाको अभिनयको तारिफ भएपनि ‘डियर माया’ को व्यापार भने उत्साहपूर्ण हुन नसकेको त्यहाँका अनलाइनले उल्लेख गरेका छन् । फिल्मको तारिफ भएपनि व्यापार भने निकै न्युन रहेको साचारहरुमा उल्लेख छ ।